Mas'uul lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka xadka Soomaaliya iyo Kenya
Mas'uul lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Jubada Hoose
Dagaalameyaasha Al-Shabaab ayaa dusha saartey mas'uuliyadda weerarkaas.
KISMAAYO, Jubaland – Gudoomiyihii degaanka dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya ee Raas Kaambooni ayaa waxaa lagu dilay qarax Miino uu maanta haleelay kolanyo galbineysay, sidda ay xaqiijiyeen laamaha amniga.
Cabdullaahi Diiriye Cabdi ayaa xiliga uu weerarkaas la kulmay wuxuu kasoo laabtey degaanka Kulbiyow ee gobolka Jubadda Hoose.
Darawalka gaariga uu la socday Cabdi ayaa la tilmaamay in uu kamid yahay dadka ku naf-waayey weerarkaas, oo ay sheegatay Al-Shabaab.
Illo dhanka maamulka ah ayaa u xaqiijiyey Garowe Online in Cabdullaahi uu u tegay Kulbiyow si uu u soo xaliyo tabasho halkaas ka jirtay.
Xoogaga gacansaarka la leh shabakada Al-Qaacida ayaa intaas ku daray in weerarkaas ay ku dhaawacmeen saddex askari kale.
Alle ha u naxariistee, Cabdullaahi Diiriye Cabdi ayaa ku dhowaad tobban sano la shaqeynayey maamulka madaxweyne Axmed Madoobe.
Dagaaladdii Al-Shabaab looga saarey Jaziiradaha Kudhaa, Madhawo iyo Buur-gaabo ayaa la xusay in uu kaalin weyn ka cayaaray.
Mas'uuliyiin ka tirsan Jubaland ayaa laga soo xigtay in ay cambaareeyay dilka mas'uulka isla markaana ay tacsi u direen eheladiisa.
Qaraxyada lagu aaso wadooyinka ayaa kamid ah xeeladaha dagaal oo ay adeegsato Al-Shabaab tan iyo markii laga saarey magaalooyinka waaweyn isla markaana loo riixay tuulooyinka, oo weerarada ay ku diyaariyaan.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo "qeyb ka ahaa" dagaalkii Beledxaawo
Soomaliya 03.03.2020. 06:32
In ka badan tobban qof ayaa ku dhimatay dagaalka oo isugu jira shacab iyo askar.
Ducaale oo sharaxay maahmaahdii Uunsiga ee caleemasaarkii Kismaayo
Soomaliya 01.02.2020. 07:00
Sidda warbaahinta Kenya uga warantay dagaalkii Beledxaawo
Afrika 02.03.2020. 17:30
"Dadka taalada haya, dowladnimada waxay u haystaan facaa iska-celi"
Soomaliya 15.10.2019. 16:12
Duulimaadka Kismaayo oo markale la mamnuucay [Go'aan culus]
Soomaliya 12.10.2019. 00:55